DAAWO:-Bandow oo lagu soo rogay magaalada Muqdisho | Wardoon
Home Somali News DAAWO:-Bandow oo lagu soo rogay magaalada Muqdisho
DAAWO:-Bandow oo lagu soo rogay magaalada Muqdisho
Guddoomiyaha gobolka Banaadir Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yariisow ayaa ku dhawaaqay in xaalad deg deg ah la geliyey Magaalada Muqdisho ee caasimada dalka Soomaaliya.
Cabdiraxmaan Cabdulaahi Yariisow Guddoomiyaha gobolka Banaadir ayaa ku tilmaamay go’aankan la gaaray inuu yahay mid lagu doonayo in lagu xoojiyo amaanka caasimada oo maalmihii ugu dambeeyey ay ka dhacayeen qaraxyo badan oo dad badan ku dhinteen kuwo kalana ku dhaawacmeen.
Guddoomiyaha ayaa sheegay in inta lagu guda jiro xaalada deg deg ah ay bilaaban doonaan howlgallo ballaaran oo ka duwan kuwii hore si amaanka gacan bir ah loogu qabto.
Shacabka Soomaaliyeed ayuu ugu baaqay inay la shaqeeyaan Ciidanka Ammaanka dowladda Soomaaliya inta uu socdo howlgalka, isagoo ka codsaday inta ay socdaan howlgallada inay muujiyaan dulqaad badan, ayna jiro doonaan jidad badan oo xirnaan doona, iyadoo laga duulayo amni darada jirta.
Hase yeeshee Maamulka gobolka Banaadir ayaan sheegin mudada uu soconayo amarkan deg-degga ah oo ah markii ugu horeysay ee lagu soo rogo caasimada dalka sanadihii la soo dhaafay.
Previous articleXildhibaano Buuq ka kiciyay xarunta Golaha Shacabka+SAWIRRO
Next articleMan United oo 2-1 kudubatay Watford+SAWIRRO
Gudoomiyaha Maxkamadda sare oo soo saaray go’aanno culus
DAAWO:- Xildhibanadii Garbahaarey lagu soodoortay oo ID fake ah loosameeyay